လက်စွပ်များ - Come4Buy eShop
$ 13.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ - $ 15.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
$ 15.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 22.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
567 8910 11 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
သလင်းကျောက် 10KGF ရွှေဖြူလက်စွပ်...
Crystal Ring Crystal Ring 10KGF White Gold Filled Rings Material : Alloy Weight : 3g အရောင် : Gun Red , Silver Green , Silver Black
Black က /6Black က /7Black က / 8 Black က /9အနီရောင် /6အနီရောင် /7အနီရောင် / 8 အနီရောင် /9အစိမ်းရောင် / ၂၈ အစိမ်းရောင် / ၂၈ အစိမ်းရောင် / ၂၈ အစိမ်းရောင် / ၂၈ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Cubic Zirconia အပြာရောင် အရည်ကြည်ကွင်းများ
လက်စွပ် Size : #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
အပြာရောင် /6အပြာရောင် /7အပြာရောင် / 8 အပြာရောင် /9အပြာရောင် / 10 အပြာရောင် / 11 အပြာရောင် / 12 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
3 ချပ်/set ထွင်းထားသော Crystal Silver...
လာပါ 4BUY စျေးဝယ်မှကြိုဆိုပါတယ် လာပါ 4BUY စျေးဝယ်မှကြိုဆိုပါတယ် ~~~~~ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကျေးဇူးပါ~~~~~
5 Pcs / Geometric သတ်မှတ်ရန်...
Crystal Cross Pendant Geometry လက်စွပ်
Crystal Cross Pendant Geometry Crystal Cross Pendant Geometry Rings 10 Pcs/set . 15mm၊ 16mm နှင့် 17mm အရွယ်အစား အပါအဝင်၊ မတူညီသော လက်ချောင်းများပေါ်တွင် သီးခြားဝတ်ဆင်နိုင်သည် သို့မဟုတ်...
4 Pcs/ Set Ring Set...
7 Pcs/set Crown Heart Crystal...
အဖွင့်လက်စွပ် 10 Pcs/Sets
အဖွင့်ကျောက်မျက်ရတနာ အဖွင့်ကျောက်မျက်ရတနာ 10 Pcs/Sets။ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် ကျောက်မျက်ပွင့်လက်စွပ် .Discover လွယ်ကူသောလက်စွပ်ပရောဂျက်များကို စတင်လေ့လာပြီး အားလုံးကိုရယူလိုက်ပါ...
8 Pcs/set ငွေရောင်လက်စွပ်အစုံ
ငွေလက်စွပ် 11 Pcs/ရွက်...
ငွေရောင်လက်စွပ် အမျိုးသမီးများ ဖက်ရှင်ရေစက် ပန်းရတနာ ပန်းပင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ထွင်းထုထားသည့် ကြက်ခြေခတ် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သဲသောင်ပြင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 11 Pcs/set သစ်ရွက်လှိုင်း ငွေလက်စွပ်အစုံ။ လာပါ 4BUY စျေးဝယ်မှကြိုဆိုပါတယ် ~~~~~ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကျေးဇူးပါ ~~~~~
8 Pcs/set Geometry Opal ကျောက်မျက်...